यस्ता पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू ! (यस्ता गुण हुनुपर्छ)
July 16, 2020 2971
सबै महिलाहरुले आफूले चाहे ज’स्तै पुरुष नभेटेपनि पुरुषमा यस्ता केहि गुण हुनै पर्छ जस’ले उनीहरु’लाई आकर्षित गर्छ । भनिन्छ हरेक महि’लाले आफ्नो जीवन साथीको कल्पना गरेका हुन्छन् ।
पुरुषमा उनीह’रुले त्यस्ता धेरै गुणहरु खोज्छन् जसमा पुर्णता होस् । सबै महिलाहरुले आफूले चाहे जस्तै पुरुष नभेटे’पनि पुरुषमा यस्ता केहि गुण हुनै पर्छ जसले उनीहरुलाई आकर्षित गर्छ ।
१) महिलालाई आदर गर्ने :
हरेक महिलाहरु आफ्नो पुरुष साथी’ले उनीहरुलाई आदर र इज्जत गरोस् भन्ने चाह’न्छ । हेपेर बोल्ने कुरा काट्ने तथा महि’लाको इज्जत नगर्ने पुरुषहरुलाई उनीहरु मन पराउँदैनन् ।
२) साँचो रुपबाट माया गर्ने :
म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन । व्यावहारिक रुपबाटै महिलाहरु कोमल हुने भए’कोले पुरुषहरुबाट बढी मा’याको अपेक्षा गर्दछ । साँचो माया साना साना कुराहरु बाँडेर दैनिक रुपबाट गरिन्छ ।
जस्तै : उनलाई सहायता गर्नु , उनीसँगै बसेर चिया पिउनु, कस्तो छौ भनेर सोध्नु, जन्मदि’नको उपहार दिनु, उनीसँ’गै घुम्न जानु आदि । यस्ता कुराहरुले महिलाहरुलाई धेरै खुसि दिन्छ । पुरुषको वास्ता र फिक्रिले महिलाहरुको जोस र उमङ्ग बढ्छ ।
३) सुरक्षा दिन सक्नु :
महिलाहरुले आफ्नो पुरुष साथीप्रति चाहना राख्ने अर्को गुण उनीहरु_लाई सुरक्षा दिन सक्नु पनि हो । हरेक महिला_हरु आफ्नो पुरुषबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि_ आफू सुरक्षित छुँ भन्ने महसुस गर्न चाहन्छन् । व्यक्तिगत तथा सामाजिक दुवै रुपबाट पुरुषले महिलालाई सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पुरुषबाट आफू असुरक्षित छुँ भन्ने लागे_मा महिलाहरु त्यस्ता पुरुषको नजिक बस्न चाहदैन ।
४) उदाहरण बन्नु :
हरेक मानिसको जीवनमा कोहि’ न कोहि रोल मोडेल हुने गर्छ । प्राय सबै महिलाहरु’ आफ्नो पुरुषमा त्यहि रोल मोडेल खोज्छन् । कुनै फिल्मि अभिनेता, ठूलो उध्योगपति वा खेलाडि आदि । तपाईले प्रशस्त कमाई गर्नै पर्छ भन्ने होइन तर उनले तपाईमा खुसि_साथ राख्न सक्छ भन्ने कुरा देख्नु पर्छ ।
धैर्यवाण पुरुषलाई महिला’हरु बढी मन पराउँछन् । सम्भोगको बेलामा मात्र होइन कि’ हरेक समयमा पुरुषहरुमा धैर्यता हुनु पर्छ । साना साना कुरामा आत्तिने, चिन्ता गर्ने, एउटै कुरालाई सोचेर बसि’राख्ने पुरुष महिलाहरुले रुचाउँदैनन् ।
६) विश्वास योग्य :
विश्वास योग्य वा भरो’सा गर्न लायक व्यक्ति भेटिन गार्‍हो भए पनि महिलाहरु यस्तै पुरु’षको खोजिमा हुन्छन् । झु’ठा बोल्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र कुरा गर्ने पुरुषहरु महिलाको रोजाईमा पर्दैनन् ।
७) नम्र तथा सहयोगी :
घमण्डी तथा रिसाहा पुरुष महिलाहरु’लाई मन पर्दैन । गम्भिर, नम्र र शान्त स्वभावका पुरुषहरु धेरै महिलाहरुले रुचाउँछन् । गफिएर बस्ने, हल्ला गर्ने त’था ठट्टा गर्ने पुरुषहरुलाई महिला’हरु क्षणिक रुपमा मन पराए पनि लामो समयको लागि उनीहरुलाई मन पर्दैन । साथै पुरुषहरु नम्र भएको पनि मन पराउँछन् ।
८) सरसफाइलाई ध्यान दिने :
जथाभा’वि लुगा लगा’उने अथवा भद्द भएर दिँड्ने पुरुषलाई पनि महिलाहरु मन पराउँदैनन् । सफा र आफूलाई सुहाउँदो लुगा ल’गाउने पुरुषहरु हरेक महिलाहरुलाई आकर्षक बन्छन् ।
९) महत्वाकांक्षि र साहसिक :
यदि पुरुषमा महत्व’कांक्षा, केहि गर्ने जोस जाँगर र चाहना छैन भने त्यस्ता पुरुषलाई महिला मन पराउँदैनन् । हरेक महि’लाले आफ्नो पुरुषमा साहस, केहि गर्ने ईच्छा, जोस र जाँगर चाहन्छन् ।
तपाई पनि आफूमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्, यी गुणहरु छैन भने ल्याउने को’शिस गर्नुहोस् निश्चय तपाई पनि महिला’को रोजाईमा पर्नु हुने छ । महिलाहरु साना साना कुराले खुसि बनाउँछ त्यसै’ले उनलाई साना साना कुराले नै खुसि दिनुहोस् । एजेन्सी
Prevइयरफोन बिग्रियो ? अब यसरी आँफैले घरमै बनाउनुहोस्…
Nextखुशीको खबर : विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई अब सरकारी खर्चबाट उद्दार गरिने
श्रीमान गुमाएको म अभागीले जवान छोरा पनि गुमाँए, अब कसको मुख हेरेर बाँचौं? (भिडियो)
सांसद गंगा चौधरी रोएको भाइरल भिडियो पछाडिको वास्तविक अन्तरकथा यस्तो रहेछ